Previous Article Obianọ Akpọkuo Ndị Igbo Ka Ha Na-Akwàlite Njirimara Ha
Next Article Ịgụ Akwụkwọ N'efu Ga Aga N'iru na Steeti Imo
Nke a bụ nke e mere site n'aka bishọọpụ ụka Angịlịkan na dayọsiisi ahụ, bụ 'Rt. Rev'd'. Alexander Ibezim, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'ụlọ ụka "Cathedral Church of St. Faith" dị n'Awka na steeti Anambra. Oke emume ahụ bụkwa nke dọtara ọtụtụ mmadụ sitere n'ebe dị iche iche wee bịa, nke gụnyere ndị bishọọpụ, ndị ụkọchukwu, ndị chiri echichi ụkà, ndị ọrụ gọọment na ndị ọzọ e ji okwu ha agba ìzù. Mmadụ ise n'ime ndị ụkọchukwu ka e buliri n'ọkwa 'Canọn' ebe otu onye ọzọ ka e siri n'ọkwa 'Canon' bulie n'ọkwa 'Venerable'.
N'okwu ya dịka ọ na-eguzobe ndị ahụ n'ọkwa ọhụụ ahụ, bishọọpụ Ibezim mere ka ha mara na ọkwa ahụ chọrọ mweda n'ala, nnọgidesi ike n'ekpere na ijere Chineke na mmadụ ozi, ma kpọkuo ha ka ha na-enyòchagharị ndụ ha oge niile iji mara ma ha kà nọzịkwa n'okwukwe ma nwezukwa ihe niile a chọrọ n'aka ha dịka ndị ọrụ ụka.
O chetaara ha na ndị mmadụ na-ele omume na usoro obibi ndụ onye na-ezi ha oziọma anya mgbe ọbụla iji mara ụdị mmadụ ọ bụ, ma dụkwazie ha ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ihe ha na-ekwu n'okwuchukwu bụkwa ihe ha na-emeputa n'omùme, iji mee ka ndị mmadụ kwere n'oziọma Chineke bụ nke a na-akụghị mmiri, ma site na ya nwee nzọpụta zuru òkè.
Na mbụ n'okwuchukwu ya, bishọọpụ dayọsiisi Isukwuato-Umunochi lagoro ezumike nka, bụ bishọọpụ Sam Chukwuka, ónyé okwuchukwu ya gbadòrò ụkwụ na "ụlọ ụka na-aga n'ihu" (the church matches on) kwuru na ọ bụ ọrụ kara dị elu ka e kenyegoro ndị ahụ, ma gwa ha ka ha mee ka mmekọrịta ha na Chineke na mmadụ ibe ha dị ọhụụ, ma gharakwa iduhiè ìgwè atụrụ Chineke nna ranyere ha n'aka. O nyekwara ndị ahụ ndụmọdụ ka ha were oge, ihe ndị bara ha urù, ọgụgụ isi na ihe niile ha nwere wee jeere Chineke ozi ma kụtakwara Christ mkpụrụ obi, bụ nke o nyegoro ha ikike na ndụmọdụ ime, ọ bụnadị dịka ọ gwara ha ka ha ghara ikwe ka ihe ọbụla rafuo ha.
Ụfọdụ n'ime ndị ahụ e buliri n'ọkwa, nke gụnyere 'Venerable" Christian Okafor na ''Rev. Canon" Charles Chukwurah, ndị kwuru okwu n'aha ndị ọzọ, kelèrè Chineke maka ọkpụkpọ òkù ọ kpọrọ ha nakwa mbuli elu ahụ, ma rịọkwazie Ya ka ọ gaa n'ihu inyere ha aka na inye ha ike ha ga-eji wee jeere Ya ozi otu o siri kwesi. Ha kwekwazịrị nkwà ịga n'ihu n'iji obi ha rụọọrọ Chineke nna ọrụ dịka ọkpụkpọ òkù ha siri dị, iji dubàá ndị mmadụ n'alaeze ma sorokwa keta òkè na ya bụ alaeze ebighi ebi na mgbe ikpeazụ.
N'iguzobe n'ọkwa ahụ, e dukwara ndị ahụ n'iyi nrube isi nyéré Chineke nakwa nzere akwamiko nwoke na nwoke, na nkè nwoke dapụta ma ọ bụ nwaanyị dapụta, a pịachara.
A nọrọ na ya bụ mmemme wee bụọ ọtụtụ abụ dị iche iche site n'aka ndị ọbụ abụ na ya bụ dayọsiisi, ma tekwazie egwu itò Chineke.